तपाईं एक राजधानी वृद्धि मा जानु पर्छ? | अर्थव्यवस्था वित्त
तपाईं एक राजधानी वृद्धि मा जानु पर्छ?
अवश्य पनि, पूँजी वृद्धि एक आन्दोलन हो जुन इक्विटीसँग नजिकबाट सम्बन्धित छ। त्यस बिन्दुमा तपाई पक्कै पनि एक भन्दा बढी चोटि आउनुहुनेछ। किनभने प्रभाव मा, यो एक रणनीति हो कि सूचीबद्ध कम्पनिहरु द्वारा धेरै बार प्रयोग गरीन्छ तरलता संग आफैलाई सुसज्जित तपाईंको व्यापार आवश्यकताहरू पूरा गर्न। दुबै स्पेनिश शेयर बजारको ठूलो मूल्यहरूमा, साथै मध्यम र सानो पूँजीकरणको। यस अर्थमा, त्यहाँ पूंजीगत बृद्धिको थालनीको समयमा व्यावहारिक रूपमा फरक हुँदैन।
थप रूपमा, यस व्यवसाय आन्दोलन मा यसको प्रभाव को कारण विशेष प्रासंगिकता प्राप्त गरेको छ Banco Santander। खैर, यो धेरै महत्त्वपूर्ण तथ्यलाई आर्थिक रणनीतिको भागको रूपमा विकसित गरिएको छ ब्यान्को पपुलर लोकप्रिय छ। र त्यसले साना र मझौला लगानीकर्ताहरूको ठूलो हिस्सा लिनको लागि ठूलो प्रक्रियाको यस प्रक्रियामा डूबिनको लागि नेतृत्व गर्दै छ लगानी। किनभने तपाईं बिर्सनुहुन्न कि तपाईं उनीहरूलाई लाभदायक पनि बनाउन सक्नुहुन्छ।
यद्यपि एक प्रश्न जुन लगानीकर्ताले आफूलाई सबैभन्दा बढी सोध्छन् त्यो हो कि उनीहरू इक्विटी बजारमा सूचीबद्ध भएका कम्पनीहरूले जारी गरेको पूँजी वृद्धिमा जानु पर्छ। किनभने सबै केसहरूमा समान परिणामहरू हुँदैनन्। यो धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ जुन अबदेखि तपाईसँग यस जानकारीमा हुनेछ। त्यसोभए अबदेखि तपाईलाई सबै समयमा के गर्ने थाहा छ। किनभने तपाईले दिमागमा राख्नुपर्ने केहि चीज यो हो कि यो तपाईले लिनु पर्ने सजिलो निर्णय हुनेछैन। किनभने तिनीहरू शेयर बजारमा आन्दोलनहरू भएका धेरै किनारहरू छन् जुन तपाईंलाई थाँहा हुन्छ।
1 ठूला वृद्धि: यसको हुनुको कारण
2 यी आन्दोलनको उद्देश्य
3 बजारले नराम्ररी स्वागत गरेको छ
4 पहिलो प्रभाव: मूल्य कमजोर पार्न
5 तपाईं कुन लक्ष्यहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ?
ठूला वृद्धि: यसको हुनुको कारण
सबै भन्दा पहिले, तपाईं यो बिर्सनुहुन्न कि यो एक संसाधन हो कि सूचीबद्ध कम्पनीहरूले उनीहरूको व्यापार लाइनहरू बढावा दिनुपर्दछ। गर्न पनि नयाँ लगानी वित्तीय बजारमा राम्रो जोखिमको लागि। यो त्यस्तो चीज हो जुन सबै ठूला वित्तीय समूहहरूमा सामान्य भएको छ। यद्यपि यसको प्रभावहरू सधैं एक समान हुँदैनन्। किनभने यो कम्पनीहरूको विकासको लागि धेरै सकारात्मक हुन सक्छ। तर केहि केसहरूमा त्यस्तै हुँदैन, तपाईले हालका वर्षहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ।
यस समयमा पूंजी वृद्धि शुरू हुन्छ, तिनीहरू हुन् पूर्व शेयरधारकहरू यी निश्चित तथ्यहरूमा जानको लागि निश्चित प्राथमिकता छ। यद्यपि यदि तपाईं प्रभावित मूल्यमा स्थित हुनुहुन्न भने पनि तपाईं यस प्रकारको अपरेशनमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईंले तिनीहरूलाई जारी गरेको केही महिनामा लाभदायक पनि बनाउनुहुनेछ। जुन वित्तीय बजारमा यसको कार्यान्वयनको साथ अनुसरण गरिएको उद्देश्य हो। किनभने वास्तवमा, सबै भन्दा राम्रो परिदृश्यहरूमा, तपाईं यी धेरै विशेष र अहिले पारंपरिक अपरेशनहरूमा एकै समयमा धेरै कमाउन सक्नुहुनेछ।
यी आन्दोलनको उद्देश्य
कुनै पनि सेभरको लक्ष्य नयाँ सेयरहरुबाट केहि यूरो प्राप्त गर्नुमा अलिकति शंका छैन। जे भए पनि, यो नसोच्नुहोस् कि यसको मुनाफा केहि दिनहरूमा यसको प्रक्षेपण पछि उत्पन्न हुनेछ। किनकि यो वास्तवमै यस तरिकाले होइन, तर फाइदाहरू लामो सर्तहरूमा जानुहोस्, उदाहरणका लागि मध्यम र लामो अवधिमा। यदि तपाई के चाहानुहुन्छ इक्विटीमा यी अपरेशन्सको माध्यमबाट अधिक वा कम द्रुत फिर्ती हो भने तपाईले ठूला पूंजी वृद्धिलाई बिर्सनुहुन्छ।
यी प्रक्रियाहरूमा समावेश भएका धितोहरूको मूल्यमा यसको प्रभावहरू केही महिना पछि ध्यान दिइने छ। यो अवधिमा तपाईले आफैलाई सोध्नु पर्छ यदि यी आन्दोलनहरुबाट संचित स्थिति पूर्ववत गर्न यो उपयुक्त छ भने। औंलामा कि सबै भन्दा सकारात्मक अवस्थामा यो पनि सम्भव छ नयाँ सेयरको मूल्य दोगुना गर्दै। अझ बढी आक्रामक पुनर्मूल्यांकनहरू पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन। यो किन यति महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी पूंजी वृद्धि छनौट गर्नुहुन्छ। किनभने तपाईं यो बिर्स्न सक्नुहुन्न कि ती सबै एकै होइनन्, यो टाढाबाट।
बजारले नराम्ररी स्वागत गरेको छ
सबै को, एक पूंजी वृद्धि वित्तीय बजार द्वारा धेरै प्राप्त गरीएको छैन। यो वित्तीय बजारमा यस प्रकारका प्रक्रियाहरूको सबैभन्दा स्थिर लगानीकर्ताहरूको पक्षमा अविश्वासको कारण हो। उनीहरूको नतीजाको रूपमा सेयरको मूल्य आश्चर्यजनक छैन केहि दिन पछि ह्रास। किनभने त्यहाँ धेरै साना र मध्यम लगानीकर्ताहरू छन् जसले पछाडि अन्डु गर्न छनौट गर्छन्। मद्दत प्रक्रियामा डुबाउन खोज्नु हुँदैन कि भारी क्षति उत्पन्न गर्न सक्दछ। कम से कम जब यो लामो समय सीमामा आउँछ।
यस सामान्य परिदृश्यबाट, यो अत्यधिक सल्लाह दिईन्छ कि तपाईले विस्तृत विश्लेषण गर्नुहुन्छ प्रत्येक पूँजीले वित्तीय बजारमा त्यस जग्गामा वृद्धि गर्दछ। तर सबै भन्दा माथि, तिनीहरूको सर्तहरू हेर्नुहोस् र यदि तपाईंलाई उनीहरूको सदस्यता लिन राम्रो छ भने। ताकि यस तरिकाले तपाईं सबैभन्दा सही निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ एक खुदरा लगानीकर्ताको रूपमा तपाईंको रुचिहरूको रक्षा गर्न। जहाँ मूल्यमा तपाईंले नयाँ सेयरहरूको सदस्यता लिनुपर्दछ यो एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेछ। र यदि उत्तर सकारात्मक छ भने, तपाईंसँग यसमा जानुहोस् र यसको सक्दो उपयोग गर्नु बाहेक अरू विकल्प हुँदैन।
पहिलो प्रभाव: मूल्य कमजोर पार्न
इक्विटीमा यी आन्दोलनहरुबाट उत्पन्न हुने मुख्य विशेषताहरु मध्ये एक हो कि शेयर मूल्य छोटो अवधिमा खस्नेछ। उसको स्पष्टीकरण एकदम सरल छ र यो किनभने वित्तीय बजारमा बढी सेयरहरू भएकाले उनीहरू कम मूल्यका छन्। अचम्मको कुरा होइन, तिनीहरू जहाँ ट्रेडिंग सत्रहरू छन् मूल्यहरु आर्थिक आन्दोलनको नियम अनुसार समायोजित हुन्छन्। यस अर्थमा, तपाईंको लगानीले पीडित हुन सक्छ र अर्को ट्रेडिंग सत्रहरूमा उनीहरूको मूल्य गुमाउन सक्छ। ठूलो वा कम गहनतामा, क्यापिटल वृद्धिमा निर्भर गर्दछ जुन तपाईं जहिले पनि जानुहुन्छ।
जहाँसम्म, र दिनहरू जान्छन्, मूल्यहरू उनीहरूको वास्तविक मूल्यमा समायोजन हुन्छन्। अवश्य पनि, एक पटक पूंजी वृद्धि पूरा भएको छ। यस परिदृश्यबाट, केही महिना पछि तपाईं इक्विटी बजारमा सूचीबद्ध कम्पनीहरूमा यस उल्लेखनीय तथ्यबाट व्युत्पादक आपरेशनहरू गर्न सक्नुहुनेछ। यस सटीक कारणका लागि, यी अपरेशनहरू हुन् जुन मध्यम र दीर्घकालीन उद्देश्यका लागि हो। एक धेरै राम्रो परिभाषित लगानीकर्ता प्रोफाइल को लागी हो सबैभन्दा रूढीवादी समेट्छ। जहाँ सुरक्षा बजारमा लगानी गर्नका लागि अन्य दृष्टिकोणहरूमा विजय प्राप्त गर्दछ।
तपाईं कुन लक्ष्यहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ?
सबै केसहरूमा, यदि तपाईं यी व्यापारको संसारमा यी विशेष प्रक्रियाहरूमध्ये कुनै एकमा जानुहुन्छ भने, तपाईं लाभहरूको श्रृंखलाबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। त्यो अन्यथा ईक्विटी बजारमा सीधा शेयरको खरीद र बिक्रीबाट उत्पन्न गर्न सकिदैन। यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ कि तपाईंले तिनीहरूलाई आउँदो महिनाहरूमा मानेर लगत्तै पनी ग्रहण गर्नुभयो भने तपाईं लगानीकर्ताहरूमध्ये एक हुन जाँदै हुनुहुन्छ जो हरेक वर्ष हुने पूँजी बढ्नेमध्ये एकमा भाग लिन जान्छ। किनकि यो त्यस्तो चीज हो जुन महिना पछि महिना र वर्षौं बर्ष पछि आउँछ। मूल रूपमा ती निम्न परिसरहरू हुन् जुन अब हामी तपाईंलाई प्रस्तुत गर्दैछौं।
यो एक धेरै विशेष रणनीति हो जसबाट तपाईं शेयरहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ कम मूल्य परम्परागत प्रणाली मार्फत भन्दा। लामो शर्तहरूको लागि धेरै फाइदाजनक।
तपाईं एक कम्पनी मा आफ्नो लगानी विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। यस तरीकाले, तपाईंसँग त्यो क्षणबाट आयो सेयरको ठूलो संख्या। जुन तपाईंको सेयरको पुनर्मूल्यांकनको सम्भावना बढाइनेछ। यहाँसम्म कि उनीहरूलाई प्रोफाइलमा समायोजन गर्दै जुन तपाईं सानो र मध्यम लगानीकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ।
कम्पनीहरु को मामलाहरु मा कि आफ्नो शेयरधारकहरु लाई लाभांश वितरण, यो को लागी एक प्रविधि समावेश हुनेछ यस पारिश्रमिकका लागि बढी पैसा लिनुहोस्। प्रत्येक वर्ष स्थिर र ग्यारेन्टी बचतमा फिर्ताको साथ। वित्तीय बजारमा सेयर कसरी कारोबार गरिन्छ भन्ने पर्वाह नगरी।
केहि केसहरूमा शेयर बजारमा स्थिति खोल्नको लागि यो एक तरीका हो भारी छुट अधिक पारंपरिक प्रणालीहरू मार्फत सेयरको खरीदको सम्बन्धमा। यद्यपि यो तपाईको लागि चाखलाग्दो हुनेछ राजधानीको सर्तहरू पढ्न जुन तपाईलाई त्यस समयमा रुचि छ।
यो केवल पूँजी वृद्धि भएको कारणले मात्र होईन, यो धेरै लाभदायक अपरेशन हुनु पर्छ। किनभने वास्तवमा, यो विपरित हुन सक्छ र तपाइँसँग इक्विटीमा यति सामान्य अपरेसनहरू हस्ताक्षर गर्दा केही अन्य समस्या छ।
एक पूरै बर्ष को लागी, तपाईंसँग यी सुविधाहरूको धेरै प्रस्तावहरू छन्। यस बिन्दुमा यसले एक भन्दा बढि श doubt्का उत्पन्न गर्न सक्छ जुन तपाइँलाई गम्भीर बाँधमा राख्न सक्छ। यी परिदृश्यहरूलाई बेवास्ता गर्न, तपाईंसँग उत्तम विकल्पहरू प्रदान गर्ने ती अपरेसनहरू छनौट गर्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प हुँदैन। यो गर्नुभएन भने अब तपाईंलाई महँगो लाग्न सक्छ।
तपाईं यो पनि बिर्सनुहुन्न कि तपाईंले अवश्य गर्नु पर्छ प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गर्नुहोस् यी अपरेशन्सको संवेदनशील मूल्य। किनकि यो अप्भिड ट्रेंडसँग गर्न को लागी समान हुने छैन पूर्ण भिन्न भिन्नताको अर्कोसँग। र यो तपाईं कारक हुन सक्नुहुनेछ कि सफलतालाई निर्धारण गर्दछ वा पूँजी वृद्धिको होइन। अन्य आंकडा जस्तै यसको तकनीकी पक्ष बनाउँछ।
अन्तमा, तपाईं यो इन्कार गर्न सक्नुहुन्न कि यी अपरेसनहरू धेरै सकारात्मक हुँदैनन्, ताकि तपाईं आफ्नो लगानी पोर्टफोलियोमा पैसा गुमाउन सक्नुहुनेछ। यस कारणका लागि, तपाइँको निर्णयaको परिणाम हुनुपर्दछ विस्तृत ध्यान। अचम्म मान्नुपर्दैन, धेरै पैसा जोखिममा छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » बोल्सा » तपाईं एक राजधानी वृद्धि मा जानु पर्छ?
स्पेनमा ईंट बूमको फाइदा लिन मानहरू
पाँच मानहरू अगस्ट महिनामा लगानी गर्न